“ဝူဟန် အားတင်းထား”လို့ အားပေးခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာတို့ရဲ့ ဂရုဏာဗီဒီယိုဖိုင်လေး - TheeSayChin
youtube/CCTV6 CHINA MOVIE OFFICIAL CHANNEL
ဟောင်ကောင် အက်ရှင်မင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Donnie Yen ဟာ သူပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ Enter The Fat Dragon ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကို ဖေဖော်ဝါရီ (၁၄) ရက်နေ့တွင် တရုတ်နိုင်ငံမှာ ပြသဖို့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဝူဟန်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ရုပ်ရှင်ရုံတွေကို ပိတ်ထားခဲ့ရပြီး ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့မှာ ၎င်းရုပ်ရှင်ကို online streaming နဲ့သာ ပြသခဲ့ရပါတယ်။
သူ့ဇာတ်ကားကို ရုံတင်ပြသခွင့်မရခဲ့ပေမယ့် Donnie Yen ဟာ ဇာတ်ကားနဲ့ပတ်သက်ပြီး စိတ်ပျက်တာမျိုး တော့ အလျဉ်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ သူတကယ်တမ်း စိတ်ပူနေတာက ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် ကပ်ဆိုက်နေရတဲ့ ပြည်သူတွေကိုပါ။ အောက်မှာတော့ လတ်တလော ထွက်ရှိလာတဲ့ ဝူဟန်အကြောင်း စပ်ဆိုထားတဲ့ သီချင်းဗီဒီယိုဖိုင်လေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီထဲမှာတော့ Donnie Yen ဟာ အခြား အနုပညာရှင် အယောက် (၅၀) ကျော်နဲ့ တွဲဖက်ပြီး ဝူဟန်ကို ဆက်လက်တောင့်ခံထားဖို့ အားပေးခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယိုထဲမှာပါတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဟာ တရုတ်၊ ဟောင်ကောင်နဲ့ ထိုင်ဝမ်က နာမည်ကြီးအနုပညာရှင်တွေဖြစ်ကာ Li Bingbing ၊ Zhao Wei ၊ Zhou Xun ၊ Alan Tam ၊ Jackie Chan ၊ Nicholas Tse နဲ့ Jay Chou တို့လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ဗီဒီယိုထဲမှာတော့ ဝူဟန်ကို ကြံ့ကြံ့ခံဖို့ အားပေးနေတဲ့ အနုပညာရှင်ပေါင်းများစွာတို့နဲ့အတူ ကပ်ရောဂါဆိုးအတွင်းမှာ အိုးပစ်အိမ်ပစ်နဲ့ အလုပ်လုပ်နေကြတဲ့ ဆေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့သနားစဖွယ် ပုံရိပ်တွေကိုပါ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒီဗီဒီယိုတေးသီချင်းကို ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်မှာ ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး တရုတ်လူမျိုး အနုပညာရှင်တွေဖြစ်တဲ့ Chang Shilei ၊ Doudou ၊ Li Xian နဲ့ ဝူဟန်ဇာတိဖွား Zhu Yilong တို့က သီဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ သီချင်းထဲက စာသားတွေကတော့ ဝူဟန်အတွက် ကိုယ်ကျိုးစွန့်ပေးဆပ်ခဲ့ကြတဲ့ ဆေးပညာလောကက သူရဲကောင်းတွေရဲ့ ကျေးဇူးကို ဂုဏ်ဖော်သီကျူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Braver Together 約好一起勇敢
Folks at The Songwriter Music College and Funkie Monkies Publishing have come together to put up this song for you, fellow community and friends. You may access our simple 1-minute acoustic version and the backing track here. http://bit.ly/BraverTogether2020 We’re working onafull version to be shared this Friday together with Our SG#bravertogetherLove is never far away, I’ll be here by your sideWhen I look into your eyes, I see hope shining brightWhen we make it through the night, we’ll be alright‘Cause we’re braver, together now Love is never far away, I’ll be here by your sideWhen I look into your eyes, I see hope shining brightWhen we make it through the night, we’ll be alright‘Cause we’re braver, together
Posted by The Songwriter Music College on Monday, February 3, 2020
ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး စင်္ကာပူအနုပညာရှင်တွေဟာလည်း တေးသီချင်းတစ်ပုဒ် ဖွဲ့ဆိုထားပါသေးတယ်။ Braver Together အမည်ရတဲ့ တေးသီချင်းကိုတော့ The Songwriter Music College နဲ့ Funkie Monkies publishing က လူငယ်တွေပူးပေါင်းပြီး သီကုံးစပ်ဆိုခဲ့တယ်လို့လည်း asiaone သတင်းစာမျက်နှာအရ သိရပါတယ်။